मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिने - Arthakoartha.com
मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिने
काठमाडौं, २२ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिमा रहेका असहजतालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको समिक्षाको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले वित्तीय स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमा भएका ससहजतालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट नेपालसमेत प्रभावित हुने जानकारी दिए । साथै कार्यकारी निर्देशक भट्टले अहिले सोधानान्तर स्थिति मजवुत भएको र निक्षेपको वृद्धि ४ प्रतिशत भएको बताए । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ७.३ प्रतिशत रहेको पनि जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महंगो दरमा ऋण प्रवाह गर्ने र चर्काे सेवा शूल्क लिने गरेकोमा आफूहरु हइरान भएको बताए । यसबाट उद्योग व्यवसाय धरासाही बन्दै गएको उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दा अनावश्यक कागजात पेश गर्न लगाउँने हुँदा त्यसलाई सहज बनाईदिन केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गरे ।
चालु आवमा ५.३% आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने एडीबीको प्रक्षेपण
कोरोनाको प्रभावबारे लेखाजोखा भइरहेको छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
बिहीबार नेप्से परिसूचक १७ अंकले बढेर बन्द, १३ अर्बको शेयर कारोबार